Max Hotels Group relieved at Minbya Flood area, Rakhine State | Hotel Max
Max Hotels Group relieved at Minbya Flood area, Rakhine State
Posted by admin Food Drinks, Gardening Comments
ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း (Max Hotels Group အဖွဲ့ခွဲ)နှင့် ရခိုင် အမျိုးသားကွန်ယက် ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ဒေသခံများ၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ မင်းပြားမြို့မှ မင်းဘူး ချောင်းရိုးအတိုင်း မိမိတို့ ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ဖြင့် နောက်ဆုံး သွားနိုင်သော နေရာအထိ သွားရောက်၍ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းဘူးချောင်းရိုး တလျောက် သစ်ပင်များတွင် တင်ကျန်နေခဲ့သော ရွှံ့နွံများ၏ အနေအထားအရ သြဂုတ်လ ၅ရက်နေ့တွင် ၅ ပေခန့် ကျဆင်း သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ရွှေတောင်ကျေးရွာအနီးသို့ ရောက် ရှိခဲ့ပြီး အနီးတဝိုက် ကျေးရွာများထံ ဆက်သွယ်၍ရသလောက် ဆက်သွယ်၍ အဆိုပါ ကျေးရွာကို ဆုံမှတ်နေရာ သတ်မှတ်ကာ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ လာရောက် သယ်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။ မိမိတို့အဖွဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျေးရွာများမှာ ရွှေတောင်၊ ထိန်ပင်၊ ပေါက်တော၊ ဒိုင်းသား၊ အညှင်းတောင် ကျေးရွာများဖြစ်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ဆန်အပါအဝင် စားရိက္ခာ၊ ရေနှင့်ဆေးဝါးများကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရေလမ်းကြောင်း ခရီးတလျောက်တွင် အခြားသော ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ စက်လှေများလည်း သွားရောက်ပို့ဆောင်လျက် ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။
အဆိုပါဒေသအတွက် ကူညီရန်လိုအပ်နေသော ကျေးရွာများစာရင်းကို စုံစမ်းကောက်ယူလျက်ရှိပြီး ထပ်မံ၍ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ဒေသခံများနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ထောက်ပံ့ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ကျောက်တော်ဒေသသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း ရန်ကုန်မှ ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ ပေးပို့ပေးလျက် ရှိပါတယ်။
ASEAN MICE venue awards at 03:22 am, Mon 29 Jan 2018
70th Anniversary of Independence Day at 12:00 am, Thu 04 Jan 2018
International Conference on Tipitaka Studies: Traditional and Contemporary at 10:43 pm, Mon 27 Nov 2017
Happy Birthday Mr. Chairman! at 09:19 pm, Mon 22 Jun 2015
Max Hotel Socials
© 2017 Max Myanmar Hotel Co.,Ltd.All rights reserved. Web Design By MWS